समाचार प्रभाव : स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता बाँडियो
प्रदेश समाचार प्रदेश ०६
दैलेख । दैलेखको आठबीस नगरपालिकास्थित राकमका स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्ता बाँडिएको छ । साउन १६ गते बिहीवार आर्थिक अभियान दैनिकमा ‘स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको प्रोत्साहन भत्तामा अनियमितता’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएपछि उनीहरूको भत्ता दिइएको हो ।
नगर स्वास्थ्य शाखा संयोजकसमेत रहेकी स्वास्थ्य इञ्चार्ज नरेश्वरी शाहीले शुक्रवार १० जना स्वयंसेविकालाई नै एक वर्षको भत्ता दिएको स्वयंसेविका नीरा माझीले बताइन् । उनले ‘समाचार प्रकाशित भयो भनेर सोच्नुहोला तर मैले दिने नै सोच गरेको थिएँ’ जस्ता कुरा आफूहरूलाई सुनाएकोे माझीले बताइन् ।
उनले स्वयंसेविकाको भत्ता रकम अन्यत्रै कार्यक्रममा खर्च गरेको बताइएको थियो । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाका लागि २ महीनाअघि नै आएको रकम उनीहरूले पाउन सकेका थिएनन् । स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले वर्षभरि गाउँगाउँमा गई भिटामिन खुवाउने तथा खोप लगाउने जस्ता काम गर्दै आएका छन् । सरकारले छुट्टै तलब भनेर उनीहरूलाई नदिए पनि प्रोत्साहन भत्ता भनेर मासिक रू. ७ हजार ५ सय दिँदै आएको छ ।
अल्लो प्रशोधन उद्योगलाई बजारको माग पूरा गर्न हम्मे ![२०७६ माघ, ५]
हुम्ला अब दुर्गम रहेन : एक महीनाभित्र राष्ट्रिय सडक सञ्जालसित जोडिदैँ[२०७६ माघ, ५]
कर्णाली प्रदेश सडक मानवमुक्त घोषणा [२०७६ माघ, ५]
कर्णालीमा सातौँ पटक हिमपात : मोबाइल तथा टेलिफोन अवरुद्ध, जनजीवन कष्टकर[२०७६ माघ, ३]
सुर्खेतमा नेपालकै अग्लो बुद्धमूर्ति बनाइँदै[२०७६ माघ, ३]
६० लाख लागतमा होटल सिटी स्टार
हिमालयन बैंकका ग्राहकलाई होटल तथा पसलमा छूट
सिद्धार्थको सहकार्यमा निःशुल्क क्यान्सर शिविर
कामना सेवाका २ शाखा थपिए